एमसीसी प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धन तोड्ने प्रयास हुँदैछः प्रचण्ड - Tamang Page
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धन तोड्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।
२२ औं सुरेश वाग्ले स्मृति दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरु यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा रहेको र अर्को पक्ष जसरी पनि पास गर्ने पक्षमा रहेकाले गठबन्धन तोड्ने प्रयास भइरहेको बताएका हुन् ।
उनले भने,‘गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । संविधानको रक्षा र गणतन्त्रको रक्षाका लागि सत्ता गठबन्धन बनेको हो । एमसीसी प्रयोग गरी फुटाउन खोजिँदैछ । एमसीसी यथास्थितिमा पास हुँदैन हामीले भनेका छौं।’ अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका नेता कार्यकर्ताको विचार र व्यवहार फरक परेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । उनले भने, ‘अहिले हामी गलत व्यवहार र सही विचार र राजनीति भन्दा बाहिर जान लागेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । हाम्रो व्यवहार संसदवाद हुँदै एमाले हुन लागेको छ । आन्दोलन भन्दा जुरुक्क उठेर सडकमा जान्छौं । फेरि सत्ताको कुरा गर्दा संसदवादतिर लाग्छौं । यो एकदमै गलत हो ।’
उनले गलत बाटो समाएर पार्टीभित्र गुट चलाउने भए एमालेमा जान नेता कार्यकर्तालाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनले भने, यस्तो पार्टी चलाउनु भन्दा विघटन गर्ने भन्ने छलफल चलाऔं । गुट बनाउने, पैसा कमाउने, पदका लागि झगडा गर्ने हो भने एमालेमा गए भैगो नि । जानु भो त केही साथीहरु । उनीहरुको त सेटिङ छ । । त्यही विशेषतामा हामी जान सक्दैनौं । हाम्रो विशेषता क्रान्ति गर्ने हो, रुपान्तरण गर्ने हो । रुपान्तरणका लागि बल गर्नुपर्छ । हामीनै त्यो पार्टी हो जसले प्रतिगमनविरुद्ध नारावाजी गरेर अर्को नयाँजनयुद्ध गर्नुपर्छ भन्ने हामीहरु नै हो ।’
उनले रुपान्तरणका लागि आन्दोलनको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘अहिले पनि आन्दोलन गर्ने परिवर्तनका लागि, विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध भन्ने हो । हामीहरुको क्रान्ति मोह जनता र देशका लागि हो । प्रतिक्रियावादीहरुको सातो पुत्लो लिने हामीहरु नै हो । पछिल्लो चोटी यो कुरा राम्रैसँग प्रमाणित पनि हो । त्यसैले साथीहरु एकपटक आत्मसमीक्षा गरौं सही बाटोमा अघि बढ्न।’ एमालेसँग एकता आत्मसमर्पणका लागि नभएको भन्दै उनले केपी ओली जस्तो गलत व्यक्तिका कारण एकता टुंगोमा नपुगेको बताए । उनले भने, ‘एकता आत्मसमर्पणका लागि थिएन । कम्युनिष्ट एकताका लागि नेपालमा कम्युनिष्ट गोलबद्ध बनाउने थियो । ३०÷४० वर्ष कम्युनिष्टले नेतृत्व गर्छ र समाजवाद ल्याउँछौं भन्ने थियो । तर धोका भयो । केपी ओली वरिपरि प्रतिक्रियवादीहरु गोलबद्ध भए र हुन दिएनन् । प्रतिक्रियावादीहरु विरुद्ध फेरि हामीले नै धावा बोल्यौं र पराजित गर्यौं ।’
उनले फेरि जनताका मुद्दा उठाएर जनता समक्ष जानुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए । मधेसी, मुश्लिमलगायत पछाडि परेका समुदायको हक अधिकार संविधान संविधनमा नभएकाले त्यसका लागि पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘हामीले संविधान बनाउने बेला जुन वाचा गरेका थियौं पछाडि परेका समुदायका पक्षको माग सम्बोधन गरेको छैन । त्यसका लागि पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । हामी एमाले कांग्रेस जस्तो नहुने र राष्ट्रका पक्षमा हुने हो भने यी मुद्दा लिएर शान्तिपूर्ण रुपमा जनतामा जानुपर्छ । त्यसका लागि तयार रहनुस् । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेका छौं समाजवाद भन्ने तर ससदबादतिर जाँदा कसरी गन्तव्यमा जान सकिन्छ ? जरुरी पर्यो भने पार्टीहरुसँग पनि छलफल गर्छौं । संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि गरेका हौं, हक अधिकार पहिचान स्थापित गर्न । कस्तो निर्वाचन प्रणाली कस्तो व्यवस्था चाहिने भनेर । वडाको निर्वाचनमा एक करोड चाहिने अवस्था आयो । कसरी हामी जस्ता निरीहह कार्यकर्ताले चुनाव जित्छ ? त्यति गर्दा पनि भएन भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ । क्रान्तिकारी भित्रको फोहरमैला सफा गर्ने अभियान पनि हो विद्रोह । त्यसैले अर्को विद्रोह आवश्यक छ ।’
उनले नेता कार्यकर्तालाई पहिला आफैंलाई बदल्न तयार रहन आग्रह गरे । उनले भने, ‘पहिला आफैंलाई बदल्न तयार हो कि होइन ? अरुलाई भन्न चाहिँ सिपालु छौं भन्ने गल्ती त्यहीँ छ । अरुलाई सच्चिन सहयोग गर्ने हो गाली गर्ने होइन । हामी यो जातका मान्छे होइनौं, अर्कै जातका मान्छे हौं जात त्याग नगरौं ।’
प्रकाशित: भाद्र२३,२०७८ समय: 15:14:49 68पटक हेरिएको